USA oo dhab u qaadatay hanjabaada Alshabaab adkeysana amaanka Mall of America – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 23 February 2015 23 February 2015
Mareeg.com: Xoghayaha Amniga Gudaha ee Maraykanka Jeh Johnson, ayaa sheegay in Maraykanku uu si dhab ah u qaadanayo hanjabaadda ka soo baxday Al-Shabaab oo ku baaqday in la weeraro Suuqyada ku yaalla waddamada reer Galbeedka, waxaanu Johnson sheegay inay ka digtoonaan doonaan hanjabaaddaas oo ay xaqiiqsanayaan​
Xoogagga Amaanka ee dalkan Maraykanka ayaa qaadday talaabooyin ay ku adkeynayaan amniga goobaha ganacsiga ee dalka, ka dib hanjabaad toddobaadkan ka timid ururka Alshabab ee Somalia.
Ururka ayaa ku hanjabay inuu weerari doono goobaha ganacsiga ee waaweyn ee dalalka reer Galbeedka, isaga oo si gaar ay u carrabaabay goob ganacsi oo ah ta ugu weyn Woqooyiga Maraykanka oo lagu magacaabo Mall of American. Goobtan ayaa ku taalla gobolka ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Minnesota.
Mall of America ayaa la dhigay ciidamo fara badan oo isgu jira kuwa labisan iyo kuwa dharcadka ah, waxeyna joogaan gudaha iyo wadooyinka soo gala xarruntaas ganacsi.
Xarruntaan ayaa waxey ka koobhan tahay in ka badan 500 dukaan oo waaweyn, waxaana ka shaqeeya in ka badan 12,000 oo ruux oo 100 ilaa 150 ka mid ah yihiin Soomaali, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Diiriye Nuur oo ah wariye madax-banaan kana shaqeeya Mall of America.
Alshabaab ayaa sanadkii 2013 weerar dhiiga badan daadiyey ku qaadday xarrunta ganacsiga Westgate ee dalka Kenya, waxeyna halkaas ku dileen ilaa 67 ruux.
Wasiirka Amniga: Haweeney ninkeedu horay Muqdisho ugu dhintay ayaa isku qarxisay hotel Central